नयाँ दैनिक | सूचना-प्रविधि सूचना-प्रविधि – नयाँ दैनिक
‘भिडियो च्याट’ गर्दा होस् नपुर्याउँदा…
जेठ १८, काठमाडौँ । पति वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेपछि साजना (नाम परिवर्तन) काठमाडौं आइन् । फेसबुकमै एक युवकसँग उनको चिनजान भयो । बेलाबखत भेटेर उनीहरूले शारीरिक सम्बन्धसमेत राखे । फेसबुकमा च्याट गर्दा युवकले यौनांग देखाउन आग्रह गरे ।
उनले केही नसोची युवकले भनेजसरी गरिन् । समय बित्दै गयो । भेट्न बोलाएको ठाउँमा युवत...
अब फेसबुकले चिनाउने भयो ‘बेस्ट फ्रेन्ड’
जेठ ८, काठमाडौँ । आफ्ना २ अर्ब ३० करोड प्रयोगकर्ताका लागि सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले आफ्नो न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्दैछ । उक्त परिवर्तनपछि प्रयोगकर्ताले आफ्ना सबैभन्दा निकट अर्थात् ‘बेस्ट फ्रेण्ड’हरु तथा प्रयोगकर्ताका सबैभन्दा उपयोगी लिंकहरुलाई न्यूजफिडमा सबैभन्दा माथि हेर्न पाउनेछन् ।
फेसबुकले यस बारेमा धेरै जानका...
फेसबुकले भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने
बैशाख २३, काठमाडौँ । फेसबुकले आफ्नो भिडियो च्याट एप बन्द गर्ने भएको छ । ग्रुप भिडियो च्याटको प्रमुख एप हाउसपार्टीको एक क्लोन बन्द गर्ने निर्णय फेसबुकले गरेको हो । द भर्जको रिपोर्ट अनुसार बोनफायर नामको क्लोन एप यहीँ महिनादेखि नै बन्द हुनेछ । सन् २०१७ को अन्त्यमा फेसबुकले डेनमार्कमा यो एपको परीक्षण सुरु गरेको थियो ।
मौसम पूर्वानुमान : आजदेखि ३ दिनसम्म पानी पर्ने
चैत ११, काठमाडौँ । मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि बुधबारसम्म पानी पर्ने र हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको पूर्वानुमान गरेको छ । मेडिटेरानियन सीबाट नेपाल आएको जलवाष्पयुत्त हावाका कारण सोमबार पश्चिमी क्षेत्रमा, मंगलबार देशभरी र बुधबार पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा हुने मौसमविद्ले जनाएका छन् ।
आज देशको पश्चिमी भूभागमा र अन्...
‘गुगल’लाई इयूले १ अर्ब ८६ करोड जरिवाना लगायो
चैत ७, काठमाडौँ । युरोपेली संघ (इयू) को प्रतिस्पर्धा आयोगले गुगलमाथि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ । प्रतिस्पर्धी अनलाइन सर्च विज्ञापनदातालाई ब्लक गरेको आरोपमा १४९ करोड यूरो अर्थात् लगभग १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको हो ।
दुई वर्षभित्र गुगलमाथि प्रतिस्पर्धा नियमको उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवाना लगाएको...
जीवितै मान्छेलाई फेसबुकले मृत घोषणा गरेपछि…
फाल्गुण ६, काठमाडौं । गएको शनिबार दिउँसो २ बजेतिर फेसबुक चलाउन खोजेँ, चलेन । फेरि लगइन गर्न खोज्छु, चल्दैन । जति गर्दा पनि चल्दैन । मैले नेटमा केही समस्या भयो कि भनेर खासै ध्यान दिइनँ । खफिसमा जान हतार थियो । निस्किएँ । अफिसमा पनि फेकबुक चलेन ।
त्यसमा रहेको ‘नोटिस आइकन’ बल्ल पढेँ । मेरो होस झन्डै गायब भयो । त्यसमा लेखि...
पठाएको म्यासेज डिलिट गर्न मिल्छ, कसरी ?
माघ २६, काठमाडौँ । सोसल नेटवर्किङ्ग साइट फेसबुकले अन्ततः प्रयोगकर्ताले व्यग्र रुपमा प्रतीक्षा गरिरहेको निकै कामलाग्ने फिचर लञ्च गरेको छ । वास्तवमा फेसबुकले मेसेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि अनसेन्ड फिचर ल्याएको हो ।
अब फेसबुक मेसेन्जर प्रयोगकर्ताले मेसेन्जरमा कसैलाई पठाएका मेसेजहरु डिलिट गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रेषकले पठाइसक...
लोकसेवाको परीक्षामा आउने सम्भावित केही प्रश्नहरु
१. सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका गुफाडाँडामा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो ?
 विंसं २०७५, पुस १६ र १७ गते ।
– जलवायु अनुकूलन र यसबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले १० बुँदे गुफाडाँडा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
– जलवायु परिवर्तन तथा त्यसले पारेको असरबारे वैज्ञानिक खोज एवं अनुसन...
फेसबुकमाथि निगरानी, प्रयोगकर्ता घट्दै
पुस २३, काठमाडौँ । गत वर्ष सन् २०१८ मा हामीले सोसल मिडिया साइट फेसबुकमाथि विभिन्न खाले गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरु लागेको सुन्यौं, पढ्यौं । फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका निजी डाटाहरु व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेचिरहेको खुलासा भयो । यससम्बन्धमा जवाफ दिनका लागि फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग अमेरिकी संसद सिनेटमा हाजिर हुनुपर्यो । फेसबुक...
अब अनलाइनबाटै बिहे, कोमल ओली ‘कारोबारी’
पुस १८, काठमाडौँ । कहिले ‘पोइला जान पाम’ त कहिले ‘मनमा आँट भाको, गोजीमा गाँठ भाको, यत्तिको मर्द भेटिएन कोही’ भनेर लोक गीतमार्फत बह पोख्ने चर्चित लोकदोहोरी गायिका कोमल ओली अब ‘कारोबारी’ बन्ने भएकी छिन् । दुई बीस उमेर काटिसक्दा पनि अविवाहित नै रहेकी ओलीले ‘माइस्वयम्भर डटकम’ नामक अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरी सोही मार्फत बरवधुको व्य...